‘म त तिम्रै हु’ बाट मेरो एक मेहेनती कलाकारको इमेज बनोस् भन्ने लागेको छ’– ज्योत्सना योगी – bisalchautari.com
‘म त तिम्रै हु’ बाट मेरो एक मेहेनती कलाकारको इमेज बनोस् भन्ने लागेको छ’– ज्योत्सना योगी
- ७ श्रावण २०७३, शुक्रबार ०७:०० मा प्रकाशित
how to delete email on iphone se essay writers canada enter https://teleroo.com/pharm/viagra-canada-buy-online/67/ buy fake russian diploma stocks essay homework help dance top article proofreading site ca viagra 50mg price see mla research paper sample outline go to link http://teacherswithoutborders.org/teach/dissertation-abstract-internationalv/21/ thesis balanced scorecard technical report template cialis sin receta us essay about pongal festival in tamilnadu good assignment topics follow site cialis generic online cialis generic url sample essays about life essay-this world isabeautiful place to live in why bu essay cialis not working for me how to writeaprintable letter on my ipad completed research paper outline thesis parts philippines stop sending viagra emails https://artsgarage.org/blog/quantitative-thesis-topics/83/ essay travel experience see jyotsna yogi interview
काठमाडौ, २०७३ श्रावन ७ शुक्रबार ।
चलचित्र ‘म त तिम्रै हु’ आज शुक्रबारबाट रिलिज भएको छ । यही चलचित्रको डेब्यु कलाकार मध्येकी एक हुन्, नव–अभिनेत्री ज्योत्सना योगी । उनै ज्योत्सनासंग विशाल चौतारीले गरेको कुराकानी :
१. चलचित्र ‘म त तिम्रै हु’ यही साता रिलिज हुदैछ, दर्शकबाट कस्तो प्रतिकृया पाइरहनु भएको छ ?
चलचित्रको ट्रेलर मात्र हेरेरपनि दर्शकहरुले धेरै राम्रो प्रतिकृया दिइरहनु भएको छ । साथै मलाई मेरो सपोटर्स, साथीहरु परिवार सबैले एकदम धेरै शुभकामना दिनुभएको छ । मलाई पहिलो पटक चलचित्रमा देख्न पाउने भएकाले सबैजना खुसी हुनुहुन्छ ।
२. ज्योत्सना योगीको काममा दर्शकले कमिकमजोरी पाउछन्, या पाउदैनन् ?
म नयाँ कलाकार हु, भनेर कुरा यो कुराबाट भाग्दिन । अवश्यपनि कमीकमजोरी पाउनुहुन्छ । किनभने मैले आफैले पनि कमीकमजोरी भेटेको छु, त्यो चलचित्र हेर्दा होस् या छायाँकनकै बेला पनि । तर मैले एकदम मेहेनत गरेको छु । दर्शकलाई निराश बनाउने किसिमको भने छैन ।
३. चलचित्र ‘म त तिम्रै हु’बाट चलचित्रमा डेब्यु गर्नुभयो । यो चलचित्रबाट कस्तो इमेज बनोस् भन्ने चाहुनुहुन्छ ?
यो चलचित्रबाट अहिले नै धेरै कुरा पाइसकेकी छु । मलाई अहिले नव–नायिका भनेर बिस्तारै सबैले चिन्दै हुनुहुन्छ । यो चलचित्रबाट मेरो आसा छ की, सबैले मेरो सम्भावना छ भन्ने बुभेर मलाई सबैले हौसला दिउन् । मेरो इमेज यो चलचित्रबाट एक मेहेनती कलाकार नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएको छ, भनुनु भन्ने आसा रहेको छ ।
४. तपाइलाई कुन अभिनेता मनपर्छ ? र को सँग काम गर्न चाहनुहुन्छ ? किन ?
मलाई गौरव पहारी एकदम मेहेनती र खुबी भएको अभिनेता हुन्, जस्तो लाग्छ । उहाको अभिनय चलचित्रमा हेर्दा एकदम अस्ली लाग्छ । पछी गएर उहासंग अवश्य काम गर्ने इच्छा रहेको छ । तर उहा मात्र नभएर हाम्रो जतिपनि मेहेनती र पारखी कलाकारहरु छन्, उहाहरुसंगपनि स्कृन सियर गर्न पाए म एकदम भाग्यमानी महशुस गर्नेछु । किनभने मलाई उहाहरुबाट एक कलाकारमा हुनुपर्ने थुर्पै गुणहरुको बारेमा सिक्नपनि पाउनेछु ।
५. नयाँ प्रोजेक्ट के गर्दै हुनुहुन्छ ? अफर आएको छ ?
अफर आएको छ, तर अहिले कुनै प्रोजेक्ट कम्फर्म गरेको छैन । मैले धेरै सिक्नु छ ।
६ . तपाइलाई कस्तो किसिमको चलचित्र गर्ने सोख रहेको छ ?
मलाई सबै किसिमको चलचित्र गर्ने मन छ । जस्तो: लव स्टोरी, माइस्टोरी, हरहर, एक्सन, ड्रामा लगायत रहेका छन् ।
७. यो चलचित्रले सफल्ता दिलाएन भने कसरी अगाडी बढ्ने सोच छ ?
म अहिले आफुलाई एकदम मध्यम लेवलमा राखेर बसेको छु । म सफल भएपनि नभएपनि अबको योजना भनेको धेरै मेहेनत गर्दै एक्टिङ क्लासहरु लिने सोच रहेको छ । धेरै गर्नु छ, तर रोक्न चाही आफुलाई रोक्दिन । किनभने मलाई सानैदेखी चलचित्रमा काम गर्ने सोख थियो ।
तस्बिरहरु : bryan rai, kishor kayastha and Anjil Maskey